Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Juan Foyth Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya "Juan". Anyị bụ Juan Foyth Child Story and Unold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye nchebe zuru oke. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Juan Foyth nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Juan Foyth nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Juan Marcos Foyth mụrụ na 12th nke Jenụwarị 1998 na ndị mụrụ ya Mr na Mrs Ariel Foyth na La Plata, Argentina - ebe omumu nke Juan Sebastian Veron.
Ị maara?… Ezinụlọ Juan Foyth bụ ndị Polish Argentine nke pụtara na ha bụ ụmụ amaala Argentine na-ele mmadụ anya n'ihu Polish nna.
Ezinụlọ Foyth na-esonyere ezinụlọ ndị Polish ndị ọzọ bụ ndị mebere obere ọnụ na Argentina. Ma nne ya na nna ya niile na-ejide akwụkwọ ikike Polish ma kọọrọ ya na ọgbọ ndị gara aga bịara Argentina n'etiti 1919 na 1976.
Juan tolitere n'ezinụlọ na ụmụnne nne na nna. Ọ bụ naanị ya, mama ya, papa na ndị ikwu ya. Ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ na-ajụ ihe nwere nwanne ma ọ bụ nwanne nwere ike ịdị. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Juan nwere ịhụnanya na nlebara anya site n'aka nne na nna ya karịsịa mama ya.
N'adịghị ka ọtụtụ ụmụ na-azụ ụmụ, tebe a abụghị ihe egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu mgbe Juan dị obere. Naanị ihe ọ chọrọ bụ naanị bọọlụ dịka onyinye nne na nna ya nyere ya. Nke a nyeere aka ịkwado ụgbọ elu ahụ na njem njem ụkwụ dị egwu nke ndụ ya.
Akụkọ Juan Foyth nke nwata - Nlekọta Ọrụ Nlekọta
Juan Foyth toro eto ọ bụghị nanị na ọ ga-achọ ịkụ egwu na Premier League ma na-enwe obi ụtọ Rio Ferdinand onye ọ hụrụ dị ka arụsị bọlbụ mbụ ya. E zigara ịhụnanya maka Rio Ferdinand “Ụlọ egwu”Nke ọ hụrụ n'anya ruo taa. Na-ekwu okwu banyere Rio Ferdinand na PlayStation. Juan kwuru otu oge;
“M na-egwuri egwu na mgbe mụ na ndị enyi m na-egwuri egwu, ana m asị 'Abụ m Rio Ferdinand'
Juan Foyth Child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite:
Fohụnanya Juan Foyth nwere maka egwuregwu ahụ nyere ya ohere idebanye aha ndị otu ntorobịa nọ na mpaghara aha ya bụ Estudiantes bụ ndị nwere dike obodo ha na mbụ Manchester United Star, Juan Sebastián Verón dị ka onyeisi ọgbakọ.
Mgbe ọ nọ na klọb ahụ, o nwere mmụọ ozi na-eche nche, onye okenye na-elekọta ya ka ọ bụ nwa ya nwoke.
Ná mmalite, Juan Foyth na-egwu egwuregwu mbụ dị ka onye na-eti ndị na-egwu egwu. Nke a bụ oge ọ gbanwere ihe nlereanya site n'iji Ricardo Kaka dị ka arụsị ya. Otú ọ dị, ịhụnanya na-adịgide adịgide maka Rio Ferdinand mere ya ka ọ gafere n'ikpeazụ iji chebe ya tupu ya agbanye 16. N'ime afọ 2017 hụrụ na a na-ekwe Juan ka ọ bụrụ ndị sooro egwuregwu ndị isi.
Juan Foyth Biography - Bilie na-ewu ewu:
Ihe malitere ịmalite maka ndị isi nke Estudiantes ozugbo Juan Foyth nwere ihe ịga nke ọma n'ime ndị otu ahụ. Egwuregwu asaa ọ na-egwuri egwu maka ndị isi otu ndị dugara ha n'ime ebe Copa Libertadores. N'otu oge ahụ, Juan Foyth zigara ndị na-eto eto ebe o nyere aka butere ndị otu egwuregwu otu egwuregwu.
Ezigbo ọrụ Foyth na ndị otu Estudiantes mere ka ndị fans mata na ọ bụ kpakpando na-arị elu. Ọ bụ onye nwere ntụsara ahụ na bọl na-eji ọtụtụ ụzọ na-agafe ma na-egbu egbu.
Ọbụna ndị na-egwu egwuregwu football tụrụ ihe ha hụrụ na Juan anya. Akụkọ banyere nwa ewu dị mma na bọl ahụ n'ụkwụ ya, dị jụụ, nwee obi ụtọ, ike, nke dị egwu ma na-eme ihe ike na Europe n'oge ahụ.
Ọ naghị ewe oge tupu Argentine ahụ a na-akwanyere ùgwù malitere ịmara ndị na-egwu egwu na-eleta ụlọ ya iji malite nkwurịta okwu ya na ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya na nke kachasị mkpa, Veron.
Ọ bụ Sebastian Veron onye mechara rụọ ọrụ ntụgharị ya site n'inye Juan Foyth n'ime ihe ọ kpọrọ "Aka Nche”Nke ahụ na-ekwu maka onye obodo ya na onye otu egwuregwu otu mba, Mauricio Pochettino.
Nwa okorobịa Juan Foyth mesịrị soro na-eto eto ọgbọ egwuregwu; Frenkie de Jong, Kasper Dolgerg, Christian Pulisic na Ruben Neves ndị nwere ike ịchịkwa egwuregwu ahụ n'oge ọ bụla. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Juan Foyth, Ariana Alonso Ndụ Ndụ:
Onye ọ bụla WAG chọrọ ịgba ọsọ ga-adị ka chi nwanyị ndị Greek bụ ndị ịma mma ha nwere ike ịmasị ma mee ka ha bụrụ ndị enyi nwoke na ndị di ha. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe banyere Ariana Alonso onye àgwà ọma ya na-akwụ ụgwọ maka enweghị ọdịdị ha.
Juan Foyth dị iche na ọ dịghị amasị ya C Ronaldo or Gerard Pique. Onye mbu na egosiputa uwa na ya bu nwoke nke 21st na mbu nke nwanyi adighi nma.
Ariana onye Juan Foyth kọwara dị ka "Nwanyị Dị Mfe" bụ onye hụrụ basketball n'anya na nnukwu onye na-ahụ enyi ya nwoke n'anya.
Mgbe ọ hụrụ na nrọ nrọ ọkachamara ya abụrụla eziokwu, Juan Foyth kpebiri ime mkpebi siri ike nke ịgwa onye ọ hụrụ n'anya na nwata.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnata £ 18,000 kwa izu, Otú ọ dị, ndụ Juan Foyth na London egosiwo na ego nwere ike ịmepụta ezigbo mma ma gbanwee ihe.
Juan Foyth Ndụ Nke Onwe:
Mata ụdị ndụ Juan Foyth ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Juan Foyth bụ onye na-ahụ n'anya na-elekọta oge ya ma nwee nnukwu ọrụ. Site na football gaa na ndụ onwe ya, Juan bụ onye na-echezọghị ebe ọ si bịa, ọ ghaghịkwa ịkwụ ụgwọ ya ụgwọ nye ndị enyi ya n'ụlọ.
Juan maara otú e si edozi onwe ya na ndụ ọkachamara. Ọtụtụ mgbe, ọ na-ahọrọ iji oge ya na onye na-egwu PlayStation n'aka ya na-egwu egwu ọ bụla karịa FIFA.
N'ikwu okwu banyere ndị na-agba ụkwụ na-achọkwa onye nlekọta, ị nwere ike iche na Hector Bellerin ga-egwu ọtụtụ FIFA. Probably nwere ike ịbụ na ị nwetara ya na-ezighi ezi. Onye Spaniard hụkwara Oku ọrụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Juan Foyth nke Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.